Maninona ireo mpivarotra miditra no mampiasa infografika | Martech Zone
Nizara infografika maro izahay tao amin'ny Martech ary namolavola ny ankamaroan'ny infografika antsika manokana ho an'ny bilaogy, ireo mpanohana azy ary ho an'ireo mpanjifanay hafa. izany infographic avy amin'ny Performancing mikasika ny antony ampiasain'ny orinasan-tserasera miditra infographic… ao anatin'izany ny maha-zavatra izy ireo, azo itokisana ary azo fehezina.
Tsy izany ihany anefa. Rehefa mamorona infografika isika dia tsy mitady hanangana linkbait fotsiny. Hitanay fa ny infografika dia novolavolaina tsara indrindra rehefa nandrahoana dingana na lohahevitra sarotra. Matetika no mora ampiasaina kokoa ny fanaovana an'io sary io noho ny fanoratana azy amin'ny paositra lava na fotsy. Ary zarain'ny olona avy hatrany satria izy ireo tsy te-hanazava ny lohahevitra koa! Raha fintinina, atiny sarobidy izy ireo izay mora zaraina amin'ny mpihaino anao. Izay no resaka marketing marketing atiny!
Ary na dia tsara aza ny fahazoana rohy dia tsy mila izany foana isika rehefa mizara azy ireo. Matetika izahay manampy antso ho amin'ny hetsika ary marika sasany hamerenana ny fifamoivoizana hiverina amin'ny tranonkalan'ny mpanjifa. Ary mandeha izy!
Tags: mampihiditra barotraSary torohaytombony amin'ny infografikafampisehoana
Adtivity: manatsara ny fiantraikan'ny doka media sosialinao
Jul 20, 2012 amin'ny 1: 28 AM
Tena mila mitady fotoana hanaovana infografika aho, tiako ireo.